आज २०७६ मंसिर ७ गते शनिबारको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस - Rapti Khabar
तुलसीपुर महोत्सवमा सोमवार देखि हेलिकप्टर यात्रा, कहाँ-कहाँ घुम्न पाइन्छ ?
यस्तो छ आज २०७६ पुस १२ गते आइताबारको भाग्यफल
भोली माघ १२ गते आइतबार तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
प्रदेश ५ को स्थायी राजधानीबारे मुख्यमन्त्री पोखरेलले दिए यस्तो प्रतिक्रिया
दाङमा जब पूर्वसभामुख घर्तीलगायत चढेको प्लेन नउडी धावनमार्गमा गुडिरह्यो…
यसपालि मौसममा देखियो यस्तो चमत्कार
मुख्य पृष्ठ /मुख्य समाचार/आज २०७६ मंसिर ७ गते शनिबारको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
आज २०७६ मंसिर ७ गते शनिबारको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
1,0453minutes read
आज २०७६ मंसिर ७ गते शनिबार। ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ रु भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ रु ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ-
अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा अलि बढि समय दिए सकारात्मक नतिजा निकाल्न सकिनेछ । व्यापार व्यवसायमा गरिएको लगानीबाट सोचे जस्तो प्रतिफल प्राप्त नहुन सक्छ । प्रेम गर्ने जोडीहरु आज टाढै बस्नु उचित छ माया प्रेममा धोका हुन सक्छ । मध्यान्हदेखि धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ भने भाग्यले साथ दिने हुँदा सानो प्रयत्नले कामहरु बन्नेछन् ।
रमाईलो यात्राको तय हुँने तथा व्यापारबाट मनग्गे नाफा कमाउँन सकिनेछ । दाम्पत्य जीवनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्दै अघि बढ्न सकिनेछ । अध्ययन अध्यापनमा अरुलाई पछि पार्दै पुरस्कार तथा प्रशंसा पत्र जित्न सकिनेछ । माया प्रेम गर्नेहरुले आफ्नो मन परेको मान्छेसँग बसेर समय ब्यतित गर्दा खुशी भएको महशुस गर्नेछन् । मध्यान्हदेखि सयम राम्रो नभएकोले ऋण,रोग तथा सत्रुको सामना गर्नुपर्नेछ ।
आश्वासन दिनेहरुले फसाउन सक्छन् भने व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्दा घाटा हुँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउने हुनाले दैनिक कामकाज गर्न गाह्रो हुनेछ । मध्यान्हदेखि बिभिन्न अबसरलाई आउँने हुँदा त्यसलाई क्याच गरि मनग्ने आम्दानी गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा सोचेजस्तै प्रगति हुँने हुँनाले आफन्त तथा गुरुहरु प्रसन्न हुँनेछन् । सवारि साधन तथा धन सम्पति हात लाग्ने योग रहेको छ ।
विद्यामा अरु भन्दा पछि परिने हुँदा मन खिन्न हुँनेछ । समयमा काम नबन्ने तथा बनेको काम बिग्रने हुँदा मनमा निरासा पैदा हुँनेछ । व्यवसायमा लगानी गरेपनि आम्दानी थोरै हुँने हुँदा दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो हुनेछ । मध्यान्हदेखि पुरानो रोग तथा समस्याहरु स्वत: ठिक भएर जानेछन् । मामा तथा मावलीबाट तपाईको काममा सहयोग हुँनेछ । पढाई लेखाईमा अरुभन्दा अग्र पंतिमा तपाईको नाम आउँनेछ ।
आत्मिय साथी तथा आफन्तसँग मनमुटाब बढ्नेछ । आमा तथा आमा सरहका मानिससँग विवाद बढ्ने योग रहेको छ । व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त समय दिनु पर्नेछ भने कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय फस्टाएर जानेछ । मध्यान्हदेखि परिवार तथा सन्तानको साथ रहने हुँनाले काममा समय दिन सहज वातावरण पैदा हुनेछ । आकस्मिक धन तथा सम्पतिहरु हात लागि हुने योग रहेको छ ।
दाजुभाई तथा छिमेकीसँग रुपैया पैसाको कारोबार गर्दा ध्यान दिनुहोला भविष्यमा विवाद सिर्जना हुँन सक्छ । असजिलो तथा अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा दैनिक कामकाज गर्न गाह्रो हुँनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि सामान्य समस्याले सताउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । अध्ययनमा रुचि नँजादा अरुभन्दा पछि परिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यवसायमा भने लगानी बढाई आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
विभिन्न अवसरहरु आउँने हुँदा त्यसलाई क्याच गरि मनग्ने आम्दानी गर्न सकिनेछ । पढाई लेखाईमा सोचेजस्तै प्रगति हुँने हुँनाले आफन्त तथा गुरुहरु प्रसन्न हुँनेछन् । छोटो तथा रमाईलो यात्राको अधिक सम्भावना रहेको छ भने व्यापारमा प्रशस्त नाफा कमाउँन सकिनेछ । दाम्पत्य जीवनमा बिश्वासको वातावरण अझ बढेर जाने हुँनाले घर परिवारमा खुसियाली छाउँनेछ ।
तपाईको चुम्बकीय ब्यक्तित्वले सबैको मन तान्नेछ । व्यापार व्यवसाय फस्टाएर जानेछ भने आम्दानीका बाटाहरु फराकिला हुनेछन् । पारिवारिक माहोलमा मिष्ठान्न भोजन गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । कामहरु समयमा नै सम्पन्न हुने हुँनाले थप काम गर्न जोश जाँगर बढेर आउँनेछ । सहयोगीहरुबाट आर्थिक लाभ हुनेछ भने उपहार प्राप्तिको योग रहेको छ । प्रेम प्रसंगमा रमाउँन चाहनेहरुका लागि समयले साथ दिनेछ ।
पढाई लेखाई तपाई आफ्नै कारणले बिग्रन सक्छ ध्यान दिनु होला । बिदेश यात्राको गतिलो सम्भावना रहेको छ भने बिदेशी सामानको व्यापार फस्टाएर जानेछ । व्यापार व्यवसायमा अरु दिन भन्दा अलि बढि समय दिनुपर्नेछ । मध्यान्हपछि व्यापार व्यवसायमा प्रशस्त नाफा कमाउँन सकिनेछ भने लगानी गर्ने वातावरण बनाउँन सकिनेछ । तपाईको लवाई खवाई देखेर सबैजना मोहित हुनेछन् ।
आम्दानीका स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ भने सामाजिक काम गर्दै नाम कमाउँन सकिनेछ । नौलो प्रकृतिको काम गरि आयस्रोतमा बृद्धि गर्न सकिनेछ । घर परिवारमा सुखद समाचारले थप उत्साह जगाउँनेछ । बिभिन्न किसिमका भौतिक लाभ हुने छन भने सवारी साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । मध्यान्हपछि लामो दुरीको बिदेश यात्राको तय हुँनेछ भने खानपानमा ध्यान दिनुहोला सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ।
साथीभाई तथा आफन्तबाट बिश्वासघात तथा धोका हुनेछ भने स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । राज्य पक्षबाट अनावश्यक झै झमेला आईलाग्न सक्छ । मान सम्मान तथा प्रतिष्ठामा कमिमो महशुस हुँनेछ । पढाई लेखाईमा समय दिन नसक्दा अरुभन्दा पछि परिने सम्भावना रहेको छ । व्यवसायमा समय दिएपनि आम्दानी गर्न मुस्किल पर्नेछ ।
धार्मिक कार्यमा मन जाने तथा मन्दिर तथा धार्मिक अनुष्ठानतिरको यात्रा गर्न सकिनेछ । लामो दुरीको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । भाग्यले साथ दिनेहुँदा सानो प्रयत्नले कामहरु बन्नेछन् । अध्ययन तथा अनुशन्धानको क्षेत्रमा तपाईकै बर्चस्व रहनेछ । व्यापार व्यवसायमा साथीभाई तथा आफन्तको सहयोग हुनेछ । नयाँ काम पाउँने तथा बढुवा हुँने योग रहेको छ ।
केही महिनाभित्रै नेपालका विमानहरु आईकाओको कालोसूचीबाट हट्छन्: मन्त्री भट्टराई
कोरियाली सीपले नेपालीको अनुहार चम्काउँदै राई दम्पत्ती
नेपालीको दसैं विदेशको कमाइमा निर्भर !
भोली मंसिर १२ गते तपाईको भाग्यफल कस्तो छ ? पढ्नुहोस
अब चितवनसम्म पाइपबाटै डिजेल र ग्यास
दाङका २ ठाउँमा मंसिर १४ गते गाडी सञ्चालनमा रोक लगाइयो
अर्घाखाँची दुर्घटना: अमृताले छोरीलाई झ्यालबाट फालेर यसरी बचाइन् [नालीबेली]